ISICELO | - Xuzhou Caixin Aluminium Imikhiqizo Co., Ltd.
Ukusetshenziswa okubanzi kwemikhiqizo ye-Caixin aluminium
Chofoza ukuze ubuke
Njengemoto yokwakha esindayo yeXCMG Group, bekulokhu kuyimikhiqizo ye-aluminium alloy enikezwe yiXuzhou Caixin Aluminium Products Co, Ltd., njengeplatifomu ye-aluminium ingxubevange, i-aluminium ingxube yebhasikidi elengayo, iladi le-aluminium ingxubevange, i-aluminium alloy guardrail, i-aluminium ingxubevange isinyathelo, njll imikhiqizo ingxubevange. Izitifiketi ezahlukahlukene zohlelo lokuphatha ukuqinisekisa ikhwalithi; I-ISO9001: Isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi ka-2015, i-ISO45001: isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwezempilo nokuphepha emsebenzini, i-ISO14001: Isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwemvelo sango-2015, isitifiketi semodeli yokusetshenziswa kwelungelo lobunikazi, isitifiketi sefektri yebhizinisi le-SGS, njll.
I-Xuzhou Caixin Aluminium Products Co, Ltd. icubungula futhi ikhiqize izimoto ezisebenza ngogesi, izingxenye zezimoto, amabhokisi amathuluzi eloli, njll. Izingxenye ze-aluminium alloy auto ezinikezwe inkampani kumakhasimende ziye zadunyiswa ngazwi linye; i-R & D yenkampani nabaqambi banolwazi olucebile lwephrojekthi nolwazi lobuchwepheshe lokunikeza amakhasimende izixazululo ezingcono zokwakha.
I-Xuzhou Caixin Aluminium Products Co, Ltd. ikhiqiza amabhokisi omoya nezinqola zomoya ezitholwe kahle ngamakhasimende. Abasebenzi bokukhiqiza banesipiliyoni somsebenzi ocebile, idizayini nenhle yokubukeka kokuklama, izinsimbi eziyinkimbinkimbi nezinqubo zomhlangano, futhi bakhiqiza imikhiqizo yekhwalithi ephezulu ye-aluminium yamakhasimende.
Ubuncane be-Aluminium, amandla aphezulu, ukuqina okuphezulu kanye nokumelana nokugqwala kwenza imikhumbi ye-aluminium ibe lula ngama-20% kunemikhumbi eyakhiwe ngensimbi noma ezinye izinto ze-alloy. Lokhu kunganciphisa isisindo somkhumbi nokusetshenziswa kwamandla. I-Xuzhou Caixin Aluminium Products Co, Ltd. ikhiqiza futhi ithengise amapuleti e-aluminium alloy, amaphrofayili we-aluminium alloy kanye nezingxenye ze-aluminium alloy zemikhumbi. Amakhasimende amasha namadala wamukelekile ukubonisana nokuhleleka.
Imboni yamandla omoya
Izingxenye zesakhiwo se-Aluminium alloy zisetshenziswe kabanzi emikhakheni eyahlukahlukene ngenxa yezici ezinjengamandla amahle womshini nesisindo esincane; I-Xuzhou Caixin Aluminium Products Co, Ltd. ikhiqiza izingxenye ze-aluminium alloy zomkhakha wamandla omoya, ozuze indumiso ngazwi linye kumakhasimende. I-R & D yenkampani nabaqambi banolwazi oluningi lweProjekthi nolwazi olunikeza amakhasimende izixazululo ezingcono zokwakha.
Namuhla, lapho izingqinamba ezinjengokuvikelwa kwemvelo nokudla ziba ngokugqama kakhulu, kunomkhuba osobala wokushintsha amaphalethi enziwe ngokhuni, ama-pallets epulasitiki kanye nama-pallets ensimbi kufakwe i-aluminium pallets emkhakheni wezimboni zokudla, ezokwelapha, ezokukhucululwa kwendle kanye nezamakhemikhali. I-Xuzhou Caixin Aluminium Products Co, Ltd. ibicwaninga futhi ithuthukisa i-aluminium iminyaka eminingi. Okuhlangenwe nakho kobuchwepheshe kwama-alloy pallets, i-ISO9001: isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi ka-2015, i-ISO45001: isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwezempilo nokuphepha emsebenzini, i-ISO14001: isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwemvelo sika-2015, isitifiketi semodeli yokusetshenziswa kwelungelo lobunikazi, isitifiketi sefektri yebhizinisi le-SGS, njll.
Ibhokisi lokuqandisa le-aluminium alloy ngokuzimela elenziwe yiXuzhou Caixin Aluminium Products Co, Ltd. lenziwe ngamacwecwe e-aluminium kanye namaphrofayili we-aluminium. Inezinzuzo zokuphila kwesevisi ende, umphumela omuhle wokudlulisa ukushisa, nesivinini sokudiliza ngokushesha. Kuvunyelwe ngamabhizinisi amakhulu asekhaya nakwamanye amazwe. Ithole idumela elihle. Lo mkhiqizo usetshenziswa kabanzi ezimbonini ezibandayo zokucubungula ezifana nemikhiqizo yasemanzini, ukudla kwasolwandle, imikhiqizo yenyama, imikhiqizo yezolimo kanye ne-sideline, kanye nokudla okufriziwe okusheshayo.
I-Xuzhou Caixin Aluminium Products Co, Ltd. inikeza amakhasimende amaphrofayili we-aluminium kanye nezingxenye ze-aluminium alloy ezicutshungulwayo eziye zanconywa njalo ngamakhasimende. Abasebenzi bezobuchwepheshe abanalo nje kuphela ulwazi olucebile lwephrojekthi nolwazi oluhlelekile, futhi bahlanganisa amathuluzi wokuqamba asizwa ngamakhompiyutha ukuthola isisombululo esihle sezidingo ezahlukahlukene zabasebenzisi, futhi babone inhlanganisela yekhwalithi nomnotho.
I-aluminium alloy rack rack yethula isethi ephelele yezobuchwepheshe base-Europe. Ngokubheka ukusetshenziswa kwasekhaya kwalo mkhiqizo, inkampani yethu yenze intuthuko enkulu nezinto ezintsha kubuchwepheshe bokuqala. Yonke indlu yamakhowe yenziwa ngamaphrofayli e-aluminium alloy, ahlangabezana namazinga wokulawulwa kokukhiqiza okuzenzakalelayo ngokuphelele futhi afinyelele ezingeni lamazwe omhlaba. I-ISO9001: Isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi ka-2015, i-ISO45001: isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwezempilo nokuphepha emsebenzini, i-ISO14001: Izitifiketi zohlelo lokuphathwa kwemvelo zango-2015, isitifiketi semodeli yokusetshenziswa kwelungelo lobunikazi, isitifiketi sefektri yebhizinisi le-SGS, njll.
Abasebenzi bezobuchwepheshe beXuzhou Caixin Aluminium Products Co, Ltd. abanalo nje ulwazi olucebile lwephrojekthi nolwazi lwesistimu, futhi bahlanganisa amathuluzi wokuqamba asizwa ngamakhompiyutha ukuthola isisombululo esihle sezidingo ezahlukahlukene zabasebenzisi ukufeza inhlanganisela yekhwalithi nomnotho. Le nkampani inezitifiketi ezahlukahlukene zokuphatha ukuqinisekisa ikhwalithi; I-ISO9001: Isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwekhwalithi ka-2015, i-ISO45001: isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwezempilo nokuphepha emsebenzini, i-ISO14001: Isitifiketi sohlelo lokuphathwa kwemvelo sango-2015, isitifiketi semodeli yokusetshenziswa kwelungelo lobunikazi, isitifiketi sefektri yebhizinisi le-SGS, njll.